Bambaano looga shakiyey bannaanka maxkamadda degmada Uddevalla - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bambaano looga shakiyey bannaanka maxkamadda degmada Uddevalla
La daabacay måndag 19 augusti 2013 kl 16.33
Maxkamadda degmada Uddevalla maanta oo isniin ah gelinkii hore laga qaxiyey dadkii ku jirey kadib markii walax bambaano u eg lagu arkay irridda aqalka lagu soo galo. Dhammaan aqalka maxkamadda iyo guryaha agagaarkiisa ah ayaa xayndaab lagu wareejiyey, lagana qaxiyey dadkii joogey. Waxaa kaloo la dib loo dhigay dhammaan wixii xukun maxkamad oo maanta la qaban lahaa.
Waxay ahayd maanta barqadii kolkay saacaddu ahayd 9:30 kolkii qof booqasho ku yimid maxkamadda uu arkay shey iriidda agteeda yaal oo tuhun geliyey, kadibna wuxuu diray qayla-dhaan. Boliiskii ayaadurbadiiba halkaas yimid oo xayndaab ku wareejiyey aqalka iyo agagaarkiisa si baaritaan loogu sameeyo sheygaas la tuhmey.
Xilligii qadada ayaa khubarada boliiska u qaabbilsan bambooyinku yimaadeen halkaas oo qaateen sheygii la tuhunsanaa. Sidaas ayaana xayndaabkii looga qaaday aqalka iyo agagaarkiisa.
Waxaa hadda la bilaabay in baaritaan lagu sameeyo sheygaas la tuhunsan yahay iyo haddii la galay dembi khatar gelin lahaa nolosha bulshada in kastoo aan weli la hayn cid la tuhunsan yahay. Mana jiraan wax hanjabaad ah oo la og yahay oo maxkamadda horay loogu soo jeediyey.